Ahoana ny fomba hamehezana ny fifamoivoizana DNS amin'ny Linux amin'ny DNSCrypt? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamehezana ny fifamoivoizana DNS amin'ny Linux amin'ny DNSCrypt?
ankehitriny ny fiarovana ny angon-drakitrao, ary koa ny fifandraisanao amin'ny tamba-jotra sy ny fitaovanao dia tsy zavatra intsony izany ihany olona manana fahalalana mandroso na orinasa tsy maintsy atao.
Ity indray mitoraka ity andao jerentsika ny fomba hanatsarana ny fiainantsika manokana amin'ny Linux, ny hataontsika dia ny fifehezana izay afaka mahita ny mombamomba ny fizahana DNS.
Na dia tsy hanafina ny fifamoivoizana IP rehetra aza izy io, dia hisorohana ny fanafihana fanararaotana DNS mampidi-doza io, hiantohana ny filaminana bebe kokoa.
Amin'ny Linux, ny fomba tsara indrindra hanaingoana ny fivezivezena DNS dia ny fampiasana DNSCrypt.
DNSCrypt dia protokolan'ny tambajotra natao hanamarinana ny fivezivezena DNS (Domain Name System) eo anelanelan'ny mpampiasa solosaina sy ny anaran'ny recursive an'ny mpizara.
Ny DNSCrypt dia mamono ny fifamoivoizana DNS tsy miova eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpamadika DNS amin'ny fananganana cryptographic mba hahitana ny fikafika. Na dia tsy manome filaminana farany aza izany dia manampy amin'ny fiarovana ny tambajotra eo an-toerana amin'ny fanafihana ataon'ny olona eo afovoany.
Izy io koa dia manalefaka ny fanafihana fanamafisana miorina amin'ny UDP amin'ny alàlan'ny fitakiana fanontaniana ho lehibe farafaharatsiny ho valiny mifanaraka amin'izany. Noho izany, ny DNSCrypt dia manampy amin'ny fisorohana ny fanararaotana DNS.
DNSCrypt dia azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny fidirana.
1 Ahoana ny fametrahana DNSCrypt amin'ny Linux?
2 Ahoana ny fomba handaminana DNSCrypt amin'ny Linux?
Ahoana ny fametrahana DNSCrypt amin'ny Linux?
Mba hametrahana ity fitaovana ity amin'ny rafitray dia tsy maintsy manaraka ny dingana zarainay etsy ambany izahay araka ny fizarana Linux ampiasain'izy ireo.
Tokony ho fantatrao fa ny fampiasana DNSCrypt dia tafiditra ao anatin'ny ankamaroan'ny tahiry fizarana Linux.
To pruneapetraho ny DNSCrypt ao amin'ny Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny fizarana azo avy amin'ireny, tsy maintsy manokatra terminal izy ireo ary manatanteraka ity baiko manaraka ity ao aminy:
Raha toa ka ireo izay mpampiasa Linux Arch and derivatives:
Ireo izay mampiasa Fedora sy ny derivatives:
Farany, ho an'ny ireo izay mampiasa kinova OpenSUSE:
sudo zypper mametraka dnscrypt-proxy
Ahoana ny fomba handaminana DNSCrypt amin'ny Linux?
Raha vantany vao tafapetraka eo amin'ny rafitra ny fampiasana, ilaina ny manamboatra azy io satria na dia napetraka aza izy io dia mbola tsy mandeha.
Noho izany dia tsy maintsy ampiasaintsika ny serivisy DNS, izay misy safidy marobe, manomboka amin'ny safidy malalaka ka hatramin'ny karama.
Zava-dehibe ny mandeha amin'ny DNS hafaRaha tokony hijanona amin'ilay omen'ny ISP anao ianao, raha mila filaminana bebe kokoa ianao.
Azon'izy ireo atao ny misafidy izay mifanaraka aminy indrindra, manana safidy openDNS, CloudFlare ankoatry ny hafa izahay,
ankehitriny Tsy maintsy tsindrio ny kisary tambajotra ary ahitsy ny fifandraisana misy ao aminy.
Etoí Hanangana ny tenantsika amin'ny safidy IPv4 isika, ary hitady ny "DNS Servers". Ao amin'ny boaty lahatsoratra "DNS Servers" dia apetaho ity adiresy manaraka ity:
Ampio fotsiny ity adiresy DNS p ityHo an'ny IPv4:
Raha ho an'ny IPv6:
Aorian'ny fandefasana ny rindrambaiko DNSCrypt, tena ilaina ny famerenana amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity ny mpitantana ny tambajotra.
Solo karazana fotsiny:
Ny fametrahana fototra izay mamela ny fitaovan'ny DNSCrypt hiasa dia apetraka. Ny zavatra farany tokony hatao dia ny fampiharana ny mombamomba ny DNS eo amin'ny tsipika fibaikoana.
Ary izay ihany, efa ampiasain'izy ireo ao amin'ny rafitr'izy ireo izany serivisy lehibe izany. Raha te hampijanona ny serivisy DNSCrypt ianao dia soraty fotsiny ity baiko manaraka ity
Y Raha tsy hampandeha azy tanteraka, ary hisorohana ny fandehany amin'ny fanombohana dia kitiho fotsiny:
Afaka mahita fampahalalana marobe amin'ny Internet ianao, amin'ny fomba fanamboarana DNSCrypt, ary koa ireo serivisy DNS samihafa azo ampiasaina ao, jereo fotsiny ny DNSCript Wiki. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao dia afaka manatona Ity rohy ity ary koa ity hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hamehezana ny fifamoivoizana DNS amin'ny Linux amin'ny DNSCrypt?
MarkVR dia hoy izy:
Salama Lahatsoratra mahafinaritra. Ary mahaliana izy io amin'ny fisorohana ny fanafihana MitM. Saingy azoko izao lesoka manaraka izao "[ERROR] Tsy mamaha ny anarany [cloudflare-dns.com] hita ao amin'ny lisitra [/usr/share/dnscrypt-proxy/dnscrypt-resolvers.csv]" rehefa miditra amin'ny baiko sudo dnscrypt-proxy - R cloudflare-dns.com.
Zahao ny fisie dnscrypt-resolvers.csv ary tsy voatanisa ao ny DNS CloudFlare.
Azo atao ve ny tsy havaozina na ny antony tsy nametrahana azy?
Mamaly an'i MarkVR
Gregory dia hoy izy:
Heveriko fa ny "cloudflare-dns.com" dia manondro ny mpizara DNS izay hampiasainao fa tsy ny IPS DNS
Valiny tamin'i Gregory
Kali Linux 2018.3 eto miaraka amin'ny vaovao